ထိုင်းနိုင်ငံ ဓမ္မကာယ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ ကို မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်?? - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံ ဓမ္မကာယ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ ကို မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်??
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃
မန္တလေး၌ကျင်းပမည့် မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး သံဃာအပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမည့် ငွေကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ ကို အဆိုပါဆွမ်းဆန် စိမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် လှူဒါန်းသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ က မန္တလေးမြို့ ၈၄ လမ်း ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်း ဓမ္မဗိမာန်၌ ကျင်းပသည့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်း လှူပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဓမ္မကာယ ဖောင်ဒေးရှင်းမှလှူဒါန်း မည့်အစီအစဉ်အား အခမ်းအနားကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလင်းက ထည့်သွင်း ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
”ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲမှာ အလှူရှင်တိုင်းမပင်မပန်းလှူ နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ တတ်နိုင်တဲ့အလှူရှင်များက အလှူ ငွေအများအပြားထည့်ဝင်လှူဒါန်းတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးချင်း ဖြစ်စေ၊ မိသားစုအလိုက်ဖြစ်စေ သံဃာတစ်ပါးအတွက် အလှူငွေကျပ် ၂ဝဝဝဝ စီထည့်ဝင်လှူဒါန်း စေလိုပါတယ်။ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးပိုမိုခိုင်မာစေ ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျင်းပ ရေးကော်မတီက ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမအကြိမ် သံဃာအများဆုံးအားလှူ ဒါန်းသည့်ပွဲဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကန်တော့ခံဆရာတော်ကြီး ၁ဝ ပါးနှင့် ဆွမ်းခံသံဃာအပါး ၅ဝ၊ မန္တ လေးမြို့မှ ကန်တော့ခံဆရာတော်ကြီးအပါး ၅ဝ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၂ မြို့နယ်မှ ပင့်သံဃာအပါး ၁ဝဝ နှင့် မန္တလေးခရိုင် ခုနစ်မြို့နယ်မှ ပင့်သံဃာအပါး ၁၉၇၉ဝ တို့ကို နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူရာတွင် သံဃာတစ်ပါးလျှင် အလှူရှင်များလှူဒါန်းငွေကျပ် ၂ဝဝဝဝ အပါအဝင် ကျပ် ၃ဝဝဝဝ တိတိကို လောင်းလှူခြင်းနှင့်အတူ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို အပါး ၂ဝဝဝဝ စလုံး အကြည်ညိုခံကြွရောက်ပြီးချိန်မှာ တစ်ပြိုင်တည်းလောင်းလှူ နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။